Freebase: Ugcino lwedatha yaBantu, iiNdawo okanye ezeZinto | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 16, 2013 NgoLwesibini, Aprili 16, 2013 Douglas Karr
Zingaphezulu kwezigidi ezingama-39 izihloko kunye nezigidi zebhiliyoni ezithunyelweyo Indawo yasimahla, isiseko sedatha esikhuselweyo ekuhlaleni sabantu abaziwayo, iindawo kunye nezinto. Khawufane ucinge xa ​​ukwazi ukufikelela kulwazi ngemibuzo elula usebenzisa iMetaweb Query Language (MQL). Yiyo iFreeebase! I-Freebase inika amandla ezinye iinkqubo-ukubonelela ngezihloko ezithandwa ziapps Swayipha basebenzisa ukulungiselela kunye nokulinganisa izihloko. Enkosi ngokukhethekileyo ku UChris Carfi ngokwabelana ngetekhnoloji kunye nam!
Ukuhamba ngeWikipedia: Indawo yasimahla sisiseko solwazi sentsebenziswano esikhulu esineemethadatha ezenziwe ikakhulu ngamalungu oluntu. Yingqokelela ye-intanethi yedatha eyakhiwe efunyenwe kwimithombo emininzi, kubandakanya igalelo le-'wiki 'nganye. IFreebase ijolise ekwenzeni ubutyebi behlabathi obuvumela abantu (kunye noomatshini) ukuba bafikelele kulwazi oluqhelekileyo ngokukuko. Yaphuhliswa yinkampani yesoftware yaseMelika iMetaweb kwaye ibisebenza esidlangalaleni ukusukela ngoMatshi 2007. Imetaweb yafunyanwa nguGoogle kwintengiso yabucala eyabhengezwa ngoJulayi 16, 2010.
I-MQL yifomathi yombuzo wesitayile seJSON enokuvelisa iziphumo ezigqibeleleyo:
Kukho amaxesha ngamaxesha, njengabathengisi, apho senza khona uphando ngezihloko, izihloko ezinxulumene noko, kunye nokuchonga ulawulo kunye nobudlelwane phakathi kwezinto. I-Freebase inokuza iluncedo kolu hlobo lomsebenzi. I-Freebase inayo iwijethi yokucebisa ukukunceda ulungiselele abantu indawo okanye izinto ngaphakathi kweefom zakho. Umzekelo, mhlawumbi ufuna ukukhetha inkampani kwisixeko esithile, okanye uluhlu lweencwadi ngesihloko esithile, okanye nosaziwayo okanye iimvumi ngohlobo lweprojekthi… iFreebase inokuphendula ngedatha oyifunayo.
tags: simahlaGoogle +mqluvimba weenkcukacha
Abathengisi kunye nokuFunda ngomatshini: Ngokukhawuleza, ngobuchule, ngokuSebenza ngakumbi